पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल पक्षको अग्रता कायमै, कस्को कति मत ? « Pathibhara Post
पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल पक्षको अग्रता कायमै, कस्को कति मत ?
नेपाल पत्रकार महासंघको बुधबार भएको २६ औं महाधिवेशनबाट विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल अधिकांश ठाउँमा अग्रता लिएको छ । महासंघकाअनुसार प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी (माधव पक्ष) सहितको संयुक्त प्यानलले अग्रता कायमै राखेको छ । नेकपा (एमाले) निकट प्रेस चौतारी नेपाल, जसपा निकट प्रेस मञ्च नेपाल र राप्रपा निकट मिडिया नेपालसहितको प्यानलबाट निर्वाचनमा होमिएका निर्मला शर्मा नेतृत्वको प्यानल केही जिल्लामा अग्रता लिएपनि पछाडि रहेको छ । देशको अधिकांश जिल्लामा मतगणना जारी रहेको र केही जिल्लाको परिणाम मात्र आएको छ ।
आएको परिणामअनुसार दुवै प्यानलबाट विजयी शुरुवाट भइसकेको छ । महासंघ निर्वाचन समितिका संयोजक कपिल काफ्लेकाअनुसार काठमाडौंमा अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार बिपुल पोखरेलले ८६४ मत प्राप्त गरे । अन्य अध्यक्षका उम्मेदवारमा निर्मला शर्माले ३७१, गजेन्द्र सिंह बुढाथोकीले २९ र ९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्टले ७५८, माधव नेपालले ३८६ मत प्राप्त गरेका छन् । सोहीअनुसार महिला उपाध्यक्षमा बाला अधिकारीलाई ८०१ र दाना केसीलाई ३३६ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष (समावेशी) अन्तर्गत उदय जिएमले ३९६ र अवधेश झाले ३५२ मत प्राप्त गरेका छन् । मोहनकुमार सिंहले ७५ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै, महासचिवमा रोशन पुरीलाई ६८९, बालकृष्ण बस्नेतलाई ३९७ र सुबोध गौतमलाई ७९ मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, सचिव खुलातर्फ गोविन्द चौलागाईलाई ६८८, रामकृष्ण ज्ञवालीले ३२२, जन्मदेव जैशीले ७१ र यम विरहीलाई ७३ मत प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, सचिव मधेसीमा दिपेन्द्र चौहानलाई ६९०, स्वेता सिन्हालाई ४०७ र देवकुमार यादवलाई ४७ मत प्राप्त भएको छ । सोहीअनुसार सचिव एशोसियट्स तर्फ पवन आचार्यलाई ६७८, रामेश्वर कार्की २७७, केपी ढुंगाना ६७, केशवराज खनाल ४७, राधेश्याम दाहाल ३१ र विनय देवकोटाले २२ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, कोषाध्यक्षमा कलेन्द्र सेजुवाललाई ६५७, कृष्ण गिरी ३२०, माधव दुलाल १०० र प्रकाश थापालाई ५४ मत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, लेखा समिति संयोजकमा लेखनाथ न्योपानेलाई ६५३, द्वारिका काफ्ले ३१७ र लक्ष्मण कार्कीलाई १६२ मत प्राप्त भएको छ ।नवकान्तिपुर
माधव नेपालले भूमाफियाको कब्जामा पुर्याएको जग्गामा ओली सरकारले साइन बोर्ड राख्यो
काठमाडाैँ । गुठीको नाममा भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ ।
ओम्नी काण्ड र ७० करोडको छानबिन पोखरेल र बास्कोटा आफैले गर्ने
काठमाडौँ– एमालेले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय संसद्का विषयगत समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट
माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै, प्रधानमन्त्रीको यस्तो तयारी
काठमाडौं, चैत्र २२ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार